Ahoana no hahatonga anao ho mpitarika amin'ny pejy finday Amazon?
Isan'andro an-tapitrisany ny mpanjifa mety hitarika ny fikarohana amin'ny Amazon. Ny fanontaniana dia ny fomba hahatonga ny vokatra ho hitanao amin'ireo mpanjifanao voakasik'izany ary hampifanaraka ny tolo-kevitrao amin'ny tolotra mitovy amin'izany amin'ny mpivarotra amoron-tsena misy anao.
Amazon dia sehatra iray mahasoa ho an'ny mpivarotra an-tserasera izay ahafahan'ny olon-drehetra manangona vola an-tapitrisany. Na izany aza, toy ny amin'ny tena fiainana, ho lasa iray amin'ireo mpivarotra TOP, mila mampiasa ny fotoana, ezaka ary vola ianao amin'ny fanamafisana ny toerana misy anao. Ankoatr'izay, tokony hanara-maso hatrany ny fanovana sy ny vaovao rehetra momba ny algorithm.
Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fanavaozana farany ny algorithm Amazon. Nitranga tamin'ny Oktobra 2016 izany ary fantatra amin'ny andro nanovan'i Amazonia ny Terms of Service. Niteraka resabe sy fifanakalozan-kevitra niaraka tamin'ny vondrom-piarahamonin'ny Amazon mivantana izany vaovao izany. Ny sasany tamin'ireo mpivarotra an-tserasera dia namoy ny toerany sy ny lazany amin'ny Amazon SERP, raha ny hafa kosa nahazo tombontsoa kokoa hanatsarana ny varotra.
Noho izany, andeha aloha hiresaka momba ny fanavaozana ny algorithm ny algorithm ny fanovana ny lalànan'ny Amazon eo amin'ny lalao ary inona no mety ho tombontsoa azo avy amin'izany?
Amazon products produits changes par TOS
Taking account of the data investigated provided by Review Kick, we analyze the impact of Terms of Service change on Amazon sellers . Izany fikarohana izany dia naneho fa ny vokatra 6000, 25% monja amin'ireo mpivarotra no namoy ny heviny. Ny sokajy izay voakasika mafy tamin'ny TOS dia ahitana ny trano fidiovana sy sakafo, elektronika, fahasalamana sy fikarakarana manokana, zazakely, hatsaran-tarehy, sns.
ny hafa. Araka ny antontan-kevitra momba ny statistika, vokatra be dia be misy ny famerenana mialoha ny fiovan'ny TOS dia mitaky ny hamerenana ny ampahany kely kokoa ny valin'ny fanadihadiana. Tsara homarihina fa tsy nisy sokajy manokana natao ho an'ny fanesorana. Ny tsikaritra nafoin'ny vokatra sasany dia nitarika ny fialan-tsasatra sy ny fihenan'ny kintana..
Toa hita fa tsy nisy vokany ny ankamaroan'ny mpivarotra Amazon. Ireo izay namoaka hevitra an-jatony maro avy amin'ny vokatra azony dia voakasiky ny Amazon TOS. Midika izany fa ny tanjon'ny Amazon dia nahitana tsindrim-peo mahery tamin'ny famerenana vokatra. Vao haingana dia ara-dalàna ny famoronana marobe maromaro momba ny vokatra Amazon. Na dia izany aza, tsy fehezin'ny fanatsarana ny fanatsarana ny paikady intsony taorian'ny fanavaozana ny algorithm farany an'i Amazon.
Na izany aza, midika ve izany fa tsy mila mampiroborobo fivarotana isika na miasa amin'ny fanatsarana velively ny varotra? Ireo fanontaniana ireo dia mitaky valiny avy hatrany raha mitazona ireo mpivarotra an-tserasera sasany avy amin'ny tetikadin'ny fampiroboroboana sy fanatsarana.
Ataovy sy don'ts
Amin'ny alàlan'ny famoahana ny algorithm farany Amazon, ny tetikady fanatsarana manaraka dia tsy isalasalàna fa manimba ny lazanao marobe sy ny laharan'ny pejy.
Amin'izao fotoana izao, tsy afaka mamporisika ny mpanjifanao ianao hamorona fanavaozana ho an'ny vokatrao. Tsy misy fomba hangatahana ny mpanjifanao mba handinika tsara amin'ny fifanakalozana fanomezana na fihenam-bidy. Ny zava-drehetra dia tokony hatao araka ny natiora sy ara-boajanahary. Raha tsy izany, ny hevitrao rehetra dia hofoanana ary avy eo dia ho very ny ezaka rehetra ataonao. Ankoatr'izany, ny mpivarotra dia tsy afaka manara-maso ny mpanjifa mahazo code coupon, mba hanamarina raha mandao famerenana izy ireo na tsia.
Ireo fihetsika voarara rehetra ireo dia mamaritra ny habetsaky ny fanamarinana hosoka, karama na fanentanana. Na dia izany aza, mbola azo atao ny mandrisika ny mpiserasera handao ny fanamarinana organika sy marina momba ny traikefa an-dalany Source .